Mitambo, 01 Mbudzi 2017
Dynamos Inokundwa Inorohwa neNgezi Platinum Stars
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva kwasara mitambo mina kuti makwikwi aya asvike kwambvura yacheka makumbo.
Dynamos neNgezi Platinum Stars Dzotashurana neMugovera
Nzira dzkatarisa kuBaobab Stadium neSvondo Kuchange kune makuwere mukupera kwesvondo apo zvikwata zvichatashurana mumakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League.
Chikwata cheCricket Chokundwa Zvinogumbura
Vateveri vekiriketi vari kutemeswa musoro nematambiro echikwata chavo icho chiri kukundwa nguva dzese pangave pamusha kana kunze kwenyika.
Vakawanda Vonyunyuta Vachiradzika Friday “Amayenge” Phiri kuZororo Memorial Park
Moses Chunga, uyo aimbove kaputeni wemaWarriors, ari kuchema kuti venhabvu vanozotarisa nezvemunhu panguva iyo anenge afa kwete achiri mupenyu.
Caps Inodzingwa muChibuku Super Cup
Makundano eChibuku Super Cup ari kupinda muma semi fainari asina kana nzombe huru imwe chete yenhabvu muZimbabwe zvichitevera kudzingwa kwaitwa Caps United kubva mumakwikwi aya.
Caps United yatarisana nenjodzi yekudzingwa mumakundano eChibuku Super Cup zvichitevera mhirizhonga yakaitika pamutambo wayo neShabanie Mine.
Caps United Yobatira Ura Mumaoko
Gumiguru 13, 2017
Zvikwata Zvorwisana Munhandare Svondo Rino
Svondo rino, zvikwata zviri kutungamira makundano eCastle Lager Premier Soccer League, Dynamos, Ngezi Platinum Stars neFC Platinum zvatarisana nenjodzi yekudonhedza mapoinzi akakosha panguva ino apo zvine mitambo yakaoma zvikuru, kunze kwemusha.
Mitambo yeChibuku Super Cup Yotsviridza
Makundano eChibuku Super Cup ari kupinda muma kota fainari pasina manyuku-nyuku anowanzofambirana nemakundano akadai.